जेठ २२, २०७७ ०३:५९:३७
सामाजिक विकास मन्त्रीले नै सामाजिक दुरी कायम गरेनन्
चैत्र २६, २०७६ बागमती खबर
चिनको वुहानबाट फैलिएको कोभिड १९ कोरोना भाइरस अहिले विश्वभर माहामारीको रुपमा फैलिरहेको छ। हालसम्म यसको संक्रमण १४ लाख ३२ हजार ३०० भन्दा बढी मानिसमा देखा परिसकेको छ। ८२ हजार भन्दा बढीको मृत्यु भैसकेको छ। नेपालमा पनि ९ जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भैसकेको छ।
केहिदिन अघि सुदुरपछिममा एक व्यक्तिबाट उनका आफन्तमा यो भाइरस सरेपछि कोरोना संक्रमणको दोश्रो चरणमा नेपाल पनि प्रवेस गरेको छ। यो चरणमा साबधानी नअपनाए सजिलै एकव्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्नेक्रम ब्यापक हुन्छ। देश लकडाउन मा छ। सरकारले पुनः दोश्रोपटक १ हप्ता लकडाउन लम्ब्याएको छ। नागरिक सडकमा निस्किन पाउने छैनन्। उच्च सतर्कता अपनाईएको छ।
तर आज हेटौंडामा निकै लाजमर्दो , गैर जिम्मेवार र हेल्चेक्र्याईपूर्ण माहोल देखियो। आज नेपाल भारत मैत्री संघको समन्वयमा एलआइसि नेपाल, नेपाल एसबीआई बैंक, एभरेस्ट बैंक ,एसियन पेन्ट र बर्जर पेन्ट लगायत ५ वटा संस्थाले संयुक्तरुपमा कोरोना हेटौंडा अस्पताललाई विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य सामाग्री हस्तान्तरण गरे।
कोरोनाको संकटका बेला र सामाग्री अभाव भैरहेका बेला लगभग ४५ लाख बढीको सामग्री सहयोग आउनु निकै राम्रो कुरो हो।
तर यी सामग्री हस्तान्तरण गरिरहदाको दृश्यभने निकै डरलाग्दो थियो।
हस्तान्तरण कार्यक्रममा हेटौंडा अस्पतालका अध्यक्ष प्रकाश पौडेल, मेसु डाक्टर प्रविन श्रेष्ठ, अर्का डाक्टर हरि खड्का, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलका स्वकीय सचिव अनुप पौडेल र बागमती प्रदेश सामाजिक बिकास मन्त्री युवराज दुलाल लगायत दाताहरु उपस्थित थिए।
देश लाकडाउनमा छ। भिडभाड नगर्नु, बाहिर नानिस्किनु, जम्मा नहुनु, मास्क अनिवार्य लगाउनु, ३ फिटको दुरी कायम गरेर मात्र बस्नु भनि सरकारले बारम्बार भनिरहेको छ। प्रहरीले फुकिरहेको छ। जिल्ला प्रसासन कार्यालयमा बारम्बार बैठक बसी कडा कडा निर्णय दिनदिनै भैरहेको छ। तर यहाँ उपचार गराउने डाक्टर भएको ठाउँमा, देश,प्रदेश हाक्ने मन्त्रि भएको ठाउँमा, अझ मन्त्रीले नै सहयोग सामाग्री समातिरहेका बेला एकै ठाउँमा १७ जना भन्दा बढीको हुल थियो। सबैजना एकै ठाउँमा टासिएर फोटो सेसन गरिरहेका थिए।
आज यस्तो दृश्य देखीनुले हामीले जिम्मेवार मान्ने निकायनै यो बिषयमा कती गम्भीर रहेछ भन्ने प्रष्ट देखिएको छ।
सहयोग सामग्री लिदै बागमती प्रदेशका सामाजिक बिकास मन्त्री युबराज दुलाल
अझ सामाजिक बिकास मन्त्री युवराज दुलाल, अनुप पौडेल, डाक्टर हरी खड्का, अस्पताल अध्यक्ष प्रकास पौडेललगायतले त मास्क नै लगाएका छैनन्।
घर बाहिर आगनमा ब्याटमिण्टन खेल्नेदेखि अत्यावस्यक सामाग्री खरिद गर्न हिडेकाकालाई प्रहरीले समाउदै गाडीमा कोच्दै गरिरहेको छ। आम जनताले सरकारको निर्णयलाई सिरोपर राखेर निसास्सिएर घरमा बसिरहेका छन्। तर चिकित्सक जस्तो जिम्मेवार व्यक्ति र प्रदेशकै मन्त्री उपस्थित स्थानमा यति धेरै भिडजम्मा भएर बिना मास्क असुरक्षित तरिकाले जम्मा भई फोटो सेसन गर्नु, जिम्मेवार व्यक्ति र निकायको निकै लाजमर्दो, गैरजिम्मेवारपन हो। यसले बढ्दो संक्रमणप्रति गम्भीर लापरवाही गरिरहेको स्पस्ट देखिएको छ।
देशको नियम, निर्णय जनताले मात्र मानुपर्ने ? जनतामात्र घर भित्र कोच्चिनु पर्ने ? सामाजिक दुरी जनताले मात्र कायम गर्नु पर्ने ? नेता, डाक्टर, मन्त्रीले सरकारले गरेको निर्णय र बनाएको नियम पालना नगरेनी हुने ? मन्त्री र डाक्टर भएका ठाउँमा जतिजनाको भिड भएपनि केहि नहुने ? उनिहरुले मास्कको प्रयोग नगर्दा नि हुने ? यी सब गरिरहदा उनीहरुबाट कोरोनाको संक्रमण नसर्ने हो ? कि नेता,मन्त्री,डाक्टरबाट कोरोनाको संक्रमण फैलिदैन ?
यस्ताकुरामा जिम्मेवार मानिएका व्यक्ति र निकायले ध्यान दिनुपर्छ। जनतालाई मात्र भन्नुभन्दा परिवर्तन ल्याउन आफुपनि लाग्नुपर्छ ।
यो दृश्यको फोटो सहितको सहयोगको समाचार संचार माध्यममा आउन थालेपछि सहयोगको भन्दा पनि फोटोमा देखिएको भिड र फोटो सेसन गरिएको जसरि खिचिएको तस्विरले सामाजिक संजालमामा मन्त्री र सरकार कै खिल्ली उडाईएको छ ।
यो बिषयमा सम्बन्धित सबैले थोरै सोच्ने हो कि। परिवर्तन जनतामा मात्र देखिनुपर्छ भन्ने हैन, मन्त्री र सरकार पनि त्यहि अनुसारले चल्नसक्नु पर्छ। यस्ता कुरामा थोरै लाज मान्न पनि सिकौं। नत्र जनताले कुरीकुरी ! भनिरहन्छन् ।
प्रकाशित मिति: बुधवार, चैत्र २६, २०७६, ०१:०४:००
मकवानपुर प्रशासनको निर्णयले हावा खायो, नाकामा छैन कडाई , बजारमा थेगीनसक्नुको भिड जेठ २२, २०७७ 526